Fantastic Android Game Download Ebe I Kwesịrị Ịmara
Part 1. Top 10 weebụsaịtị maka nbudata kasị mma android egwuregwu
Part 2. Top 10 nyiwe si ebe ị nwere ike ibudata android egwuregwu
Part 3. Were akara gị smart ekwentị na MobileGo
Android smart igwe na-aghọ ukwuu-ewu ewu n'etiti ndị ugbu a ụbọchị. Na-ewu ewu nke ndị a smart ntị, na android ngwa ọdịnala na-eme a pụrụ iche n'ebe na ahịa. Ya mere, n'agbanyeghị ma ị bụ a egwuregwu freak ma ọ bụ; ị ga-nnọọ n'anya Ibu Ibu gị smart ekwentị na nke kacha mma android egwuregwu ke ahịa. E nwere ọtụtụ ụzọ na nke ị nwere ike ibudata kasị mma android egwuregwu n'ihi na ekwentị gị.
Part 1. Top 10 nrụọrụ maka nbudata Best Android Games
E nwere ọtụtụ puku weebụsaịtị ugbu a ụbọchị nke na-ekwu maka free android egwuregwu. Ma mgbe ọ na-abịa Ibu Ibu gị smart ntị na egwuregwu, ị maa chọrọ ihe ọ bụla ma ihe kasị mma! Ya mere, ebe anyị emewo ka a na ndepụta nke ụfọdụ ndị kasị mma weebụsaịtị si ebe ị pụrụ mfe ibudata n'elu trending android egwuregwu.
Google Play bụ ukara website maka nbudata gị niile android egwuregwu. Ị nwere ike ịchọta nta ọ bụla na-ewu ewu egwuregwu ebe a nke a na-neatly categorized. Ozugbo ị pịa na green wụnye button, egwuregwu na-akpaghị aka ibudatara na arụnyere na gị na ejikọrọ ngwaọrụ. Biko pịa ebe a ileta website.
Alexa fim: 1
2. Android Games ime ụlọ
Android Games ime ụlọ bụ a pụrụ iche website na-anya isi nke ya-akparaghị ókè ọtụtụ android egwuregwu. Egwuregwu ndị a na na-categorized dị ka nguzo-naanị egwuregwu na online egwuregwu. Ha pụrụ ozugbo ibudatara na website na ị nwere ike mfe ego ya fim kwa! Biko pịa ebe a ileta website.
Alexa fim bụ maka: 254.236
1 Mobile bụ ihe magburu onwe website maka nbudata ọkacha mmasị gị android egwuregwu n'ihi na free. The website na-neatly categorized na screenshots si egwuregwu. I nwekwara ike ịhụ ndị ọhụrụ ngwa ọdịnala na egwuregwu na ala nke ihuenyo. Biko pịa ebe a ileta website.
Alexa fim bụ maka: 25.550
App Rob bụ a n'ụzọ zuru ezu fledged website na-anya isi nke android, iPhone na iPad ngwa. Ndị a ngwa ọdịnala na egwuregwu na-kpam kpam free nke na-eri ha nwere ike mfe ibudatara na website na nanị otu click. Biko pịa ebe a ileta website.
Alexa fim bụ maka: 1.635.863
5. Android égwu
Ọ bụrụ na ị na-atụ anya maka nbudata free android egwuregwu na ekwentị gị, mgbe ahụ, ọ dịghị ihe dị mma karịa ịga na Android égwu website. A zuru ndepụta nke android egwuregwu tinyere ha screenshots na nkọwa ndị dị ugbu a na nke a website. Biko pịa ebe a ileta website.
Alexa fim bụ maka: 248.725
Ị na crazy banyere android egwuregwu? Ọ bụrụ na ee, ị kwesịrị ịga leta Play Android website maka na-akparaghị ókè fun na ha na-enye ha ọbịa. Unlimited free egwuregwu, reviews na onye ajụjụ ọnụ si mmepe ime ka website uru ịga. Biko pịa ebe a ileta website.
Alexa fim bụ maka: 990.822
7. égwu ngwa
Ọ bụrụ na ị na-achọ android egwuregwu, ngwa, akwụkwọ ahụ aja na gburugburu, mgbe ahụ, égwu ngwa bụ nke zuru okè na-aga n'ihi na ị! A obere nkọwa nke ngwa, tinyere ya nkọwa, nyochaa na ụbọchị nke ntọhapụ-enyere gị aka na-eme ka mma mkpebi ma ị chọrọ ibudata ya ma ọ bụ. Biko pịa ebe a ileta website.
Alexa fim bụ maka: 26.317
8. App nwa bebi
App nwa bebi bụ ebe obibi ka Android nakwa dị ka iOS ngwa ọdịnala na egwuregwu. Ị ga-enweta ihe dị mfe nhọrọ nke na nbudata na egwu na nanị otu click. The fim na screenshot ga-enyere gị na-eme ka mma mkpebi. Biko pịa ebe a ileta website.
Alexa fim bụ maka: 10.303.791
Android Soft Free bụ ihe online website na-enye gị ohere mfe ibudata android egwuregwu gị na ngwaọrụ. N'elu downloads ke ndepụta na-egosi gị ụfọdụ n'ime ndị kasị ewu ewu egwuregwu ebudatara site ndị mmadụ. Biko pịa ebe a ileta website.
Alexa fim bụ maka: 6.671.469
Handster bụ otu nke kasị mma weebụsaịtị na ahịa maka nbudata android egwuregwu enweghị akwụ ụgwọ otu penny. Ị nwere ike ọ bụghị naanị download android ngwa kamakwa Windows, Java, Symbian, Blackberry na iPhone ngwa ọdịnala site na nke a website. Biko pịa ebe a ileta website.
Alexa fim bụ maka: 3.515
Part 2. Top 10 nyiwe si ebe ị pụrụ Download Android Games
Google Play ahịa na-idei mmiri na a ọnụ ọgụgụ nke ngwa ma e nwere ọtụtụ android ngwaọrụ site na nke a nnukwu ngwa ahịa bụ keerughi. Ọzọkwa, e nwere ọtụtụ ngwa ọdịnala na-adịghị na Google ụlọ ahịa. Ruru ka ihe ndị a, ndị mmadụ mgbe anya maka ihe ọzọ ebe ha si ike ibudata ha free android Ịgba Cha Cha ngwa. A bụ ndepụta nke top 10 nyiwe si ebe ị nwere ike mfe download gị free egwuregwu:
Otu nke kasị mma a pụrụ iji dochie Google ahịa bụ Amazon App Store. Dị na ma web-dabeere na ngwa dabeere nsụgharị, Amazon App Store adịghị achọ ị na-aga ka Google Play Echekwala maka nbudata ọkacha mmasị gị egwuregwu. I nwekwara ike ime ka na-eji ngwa ịzụrụ site na nke a ụlọ ahịa.
Platform: Android 2.2 na n'elu.
2. Ma App Store
A nnọọ mfe ngwa maka nbudata ọkacha mmasị gị egwuregwu, na App Store na-enye ya ọrụ ihe owuwu ngwa ngwa ịnyagharịa n'etiti ọtụtụ puku egwuregwu depụtara ebe a. Ị pụkwara ịhụ a nkowa na onye ọrụ-fim nke ngwa dị ebe a.
Appitalism bụ a web dabeere android ngwa ahịa na a tuo nke mmadụ ịkparịta ụka n'Ịntanet. The fim, reviews na "ọkụ ngwa ọdịnala" ngalaba-eme ka ọ pụrụ iche. Ọzọkwa Ị pụkwara ịhụ a ọnụ ọgụgụ nke Ịgba Cha Cha ngwa ọdịnala nke na-adịghị dị na Google Play ụlọ ahịa.
Platform: Windows Sistem na Mac OS.
Chọrọ ịmata ọhụrụ egwuregwu na enyi gị na-egwuri egwu? Appoke bụ a mmadụ ịkparịta ụka n'Ịntanet ngwa nke-enye gị anya n'ihi na ọhụrụ egwuregwu na enyi gị na-egwuri egwu. I nwekwara ike ibudata egwuregwu ndị ahụ ngwa ngwa site na ngwa.
Chọrọ ibudata kasị akpali akpali android egwuregwu kpọmkwem site na mmepe? Aptoide-enye ohere ọrụ ibudata ma kesaa akparaghị ókè ọtụtụ android ngwa ngwa ngwa. The ngwa depụtara ebe a na-emelitere site n'oge ruo n'oge.
F-Droid bụ na-emeghe isi android ngwa ahịa ebe ị pụrụ ịchọta iche iche nsụgharị nke Ịgba Cha Cha ngwa ọdịnala nke nwere ike mfe ebudatara ngwaọrụ gị.
GetJar bụ otu nke kasị mma ngwa maka nbudata android egwuregwu n'ihi na free. Ọ bụ a web-dabeere ngwa ya ka ị ghara nwere ibudata ma ọ bụ wụnye ngwa a maka ịnweta ya.
OpenAppMkt bụ ihe android egwuregwu ụlọ ahịa na a nnọọ pụrụ iche echiche. The egwuregwu depụtara na ngwa niile bụ web-dabeere ngwa ọdịnala nke pụtara na ị na-adịghị mkpa iji wụnye ya maka na-akpọ. Dị pịa na egwuregwu ị chọrọ igwu na ọ ga-emeghe na nchọgharị gị. The functionalities na atụmatụ nke ngwa ga-yiri nnọọ ka ngwa ọdịnala.
Chọrọ ibudata kasị mma Ịgba Cha Cha ngwa ọdịnala n'ihi android na Symbian? Phoload awade free ngwa ọdịnala nke pụrụ ozugbo arụnyere na gị na smart ekwentị.
Platform: Symbian, Android 2.2 na n'elu.
PocketGear bụ otu n'ime ndị kasị ochie ngwa echekwa dị ka ọrụ. Ị nwere ike ibudata ndị a ngwa ọdịnala free nke na-eri.
Platform: Windows, Palm, Blackberry, Symbian na Android 2.2 na n'elu.
Ị chọrọ jikwaa gị smart ekwentị mfe? MobileGo bụ ihe dị mfe ngwọta gị niile mkpa! MobileGo-akwado ndị niile ngwaọrụ-agba ọsọ na android na iOS gụnyere iPad. Mgbe MobileGo enyere mfe ohere nke gị smart ekwentị site PC, ya dị ike na management atụmatụ ebe ya n'etiti ndị kasị bara uru software nchịkọta dị na ahịa. Ị nwere ike mfe ibudata a bara uru ịba uru si internet enweghị okodu otu penny.
Gịnị ka ị pụrụ ime na MobileGo?
MobileGo bụ a ukwuu bara uru na ngwá ọrụ zuru ezu mobile management. The media Manager na ndị dị oké mkpa Toolkit njikwa ka ọ ghọọ otu n'ime ndị kasị dị ike management software dị na ahịa. The elu mgbake atụmatụ-enyere gị aka na-agbake ehichapụ data enweghị ọtụtụ hassle.
Mirroring gị android smart ntị na MobileGo!
Ị nwere ike ịnweta gị smart ekwentị na PC gị na na enyemaka nke MobileGo. The mirroring atụmatụ nke MobileGo replicates gị smart ekwentị na ihuenyo na PC gị. Uru nke mirroring agụnye ị na-elele ọdịnaya na nnukwu PC ihuenyo, mfe transfer nke faịlụ na mma ọrụ-mmekọrịta. Otu nke kasị ukwuu uru nke mirroring na-agụnye mma egwuregwu scores.
Olee otú yiri ekwentị gị maka elu scores na egwuregwu?
Nzọụkwụ 1: E kwesịrị a njikọ dị n'etiti gị smart ekwentị na PC aka mirroring atụmatụ. A na njikọ nwere ike guzosie ike site eriri USB ma ọ Wi-Fi. N'ihi na ejikọta gị smart ekwentị na PC site Wi-Fi, QR koodu ga-scanned.
Nzọụkwụ 2: Ozugbo i ejikọrọ gị smart ekwentị gị PC, MobileGo-enyere gị PC na-aghọta ya ma si otú emecha usoro nke mirroring.
Nzọụkwụ 3: Ugbu a na-eji gị òké na keyboard na-egwu ọkacha mmasị gị egwuregwu mfe ma si otú mbo mbuli gị scores n'oge na-adịghị!
> Resource> emulator> Fantastic Android Game nbudata Ebe I Kwesịrị Ịmara